Muddada la filayo inuu Sergio Aguero ka maqnaan doono Kooxda Barcelona oo la sii ogaaday – Gool FM
(Barcelona) 09 Agoosto 2021. Weeraryahanka Kooxda Barcelona ee Sergio Aguero ayaa la filayaa inuu garoomada dhaawac kaga maqnaan doono illaa bishi November.
Barcelona ayaa xilli ciyaareedkeeda cusub ee horyaalka La Liga goordhow bilaabi doonta, iyadoo aan haysan Lionel Messi, balse haddana waxaa jira warar kale oo soo jeedinaya in Sergio Aguero uu dhaawac kubka ah garoommada kaga maqnaan doono 10 isbuuc.
Weeraryahanka reer Argentina ayaa u dhaqaaqay garoonka Camp Nou markii uu beeca xorta ah uga soo tagay Manchester City horraantii xagaagan, laakiin waxa ay u muuqataa mid aan ka soo muuqan doonin in muddo ah kulankiisii ​​ugu horreeyay ee tartan rasmi ah Kooxda Barcelona.
Idaacadda Spain fadhiggeedu yahay ee RAC1 ayaa warinaysa in Aguero uu garoomada ka maqnaan karo illaa bisha November, maadaama uu xanuun aad u daran dareemay, isla markaana uu Axaddii socodku ku adkaaday.
Ronald Koeman ayaa hadda waxaa aad ugu yar xulashooyinka dhanka weerarka ee uu ku aadi karo kulanka furitaanka horyaalka La Liga ee Barcelona ay Axadda la yeelan doonto Real Sociedad.
Waxaa la arki doonaa sida uu Aguero uga soo kabsado dhaawacan, maaddaama uusan weli u ciyaarin kooxda reer Catalan, wuxuuna ahaa bedel aan la isticmaalin ciyaartii final-ka Copa America ee Xulka Argentina uu ka badiyay Brazil 11-ka bishii July.
Lionel Messi oo maanta Tijaabada caafimaad u maraya Kooxda PSG
"Barcelona way sii socon doontaa kaddib bixitaankii Lionel Messi" – Ronald Koeman